दसैंमा यात्रुको चाप अधिकतम व्यवस्थापन गरेको बुद्ध एयरले तिहारमा कसरी गर्दैछ? :: प्रकाश ढुंगाना :: Setopati
दसैंमा यात्रुको चाप अधिकतम व्यवस्थापन गरेको बुद्ध एयरले तिहारमा कसरी गर्दैछ?
पछिल्लो समय नेपालमा हवाई यात्रा गर्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। कुनै समय नेपालको घरेलु उड्डयन व्यवसाय चल्नको लागि विदेशी नै आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदै आन्तरिक यात्रुहरुको प्रवाह नै एयरलाइन्स कम्पनीहरुको लागि पर्याप्त बन्दै गएको छ ।
यसमध्ये दसैं तिहार छठजस्ता धेरै मान्छेको एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा हुने प्रवाहको समयमा त झन् सडक यातायात यति साँघुरो भइदिन्छ कि हप्तौं–हप्ता अगाडि नै टिकट बुक गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यस्तोमा नेपालीका मुख्य चाड दसैं तिहार, छठ अगाडि काठमाडौंबाट बाहिरिने, पछि भित्रिनेको भीड अत्याधिक हुनेगर्छ । यस्तोमा हवाई यात्रामा पनि भन्नेवित्तिकै नियमित उडानमा टिकट नपाउने बाध्यता रहँदै आएको छ ।
यस्तै अवस्थामा नेपालको आन्तरिक उडानमा सबैभन्दा ठुलो वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले भने अधिकतम व्यवस्थापनको प्रयास गरेको जनाएको छ । दसैँमा बढी प्रवाह हुने काठमाडौंबाट विराटनगर, पोखरा, भरतपुर, भद्रपुर, भैरहवा, नेपालगंज र धनगढीजस्ता रुटमा नियमितका अलावा दर्जनौं अतिरिक्त उडान थप गरेर सकेसम्म बढी यात्रुलाई सेवा दिएको बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक विरेन्द्रबहादुर बस्नेत बताउँछन् ।
‘चाडवाडको समयमा सकेसम्म धेरै यात्रुले हाम्रो एयरलाइन्समार्फत यात्रा गर्न पाउनु भन्ने हाम्रो ध्येय हो’ बस्नेतले भने, ‘यसको लागि हामीले साँघुरो विमास्थलका बाबजुद पनि अधिकतम प्रयास गर्यौं ।’
काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकमात्र धावनमार्ग भएका कारण चाहेर पनि एयरलाइन्सले अतिरिक्त उडान थप गर्न नसकेको कम्पनीको भनाइ छ ।
जसरी दसैं अगाडि काठमाडौं बाहिर जानेहरुको चाप थियो त्यसैगरी अहिले बाहिरबाट काठमाडौं आउनेको चाप रहेको छ ।
यो समयमा पनि बुद्ध एयरले सकेसम्म धेरैधेरै यात्रुलाई सेवा दिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बस्नेतको भनाइ छ । बुध्द एयरले मुलुकभरि पर्वतिय उडानबाहेक दर्जनौ गन्तव्यमा उडान भरिरहेको छ ।
पहिला पहिलाजस्तो नियमित उडानबाहेक चार्टड उडान भनी बढी भाडा उठाउने प्रथालाई बुध्द एयरले अन्त्य गरिदिएको छ । अहिले पनि कतिपय दुर्गम क्षेत्रका हवाई रुटमा एयरलाइन्स कम्पनीहरुले कार्टेलिङ गरिरहेको पाइएपनि सुगम रुट जहाँ बुद्ध एयरले उडान गर्छ त्यहाँ त्यस्तो अवस्था नरहेको बस्नेतको दाबी छ ।
‘हामीले पहिले नै यो क्षेत्रको कार्टेलिङलाई अन्त्य गरिदियौैं’ बस्नेतले भने,‘तर जहाँ हामीले उडान गरेका छैनौं त्यहाँका यात्रुहरु अहिले पनि पिडित भएको खबर आइरहेका छन् ।’
तिहारमा कसरी गर्दैछ व्यवस्थापन?
दसैं पछाडिको समयमा एयरलायन्स कम्पनीहरुलाई दुईप्रकारको यात्रा चाप हुनेगर्छ । एक त सडक यातायात भरपर्दो नहुँदा सकेसम्म मान्छेहरु हवाई यात्रा रुचाउन थालेका छन् ।
तर सबैले एकैपटक हवाई यात्रा गर्नखोज्दा भन्नेवित्तिकै टिकट नपाउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।
यस्तोमा बुद्ध एयरले दसैँपछाडि काठमाडौं भित्रिनेहरुको लागि नियमित उडानबाट सम्भव भए नियमित नभएमा उही भाडामा अतिरिक्त उडानबाट पनि सेवा दिइरहेको बस्नेतले जानकारी दिए ।
तिहारको लागि काठमाडौंबाट बाहिर गन्तव्यमा जाने र आउनेहरुको लागि बुद्ध एयरले अधिकतम प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ। बुद्ध एयरमा टिकट लिनको लागि कुनै एजेन्ट, एजेन्सीले ठगी गर्ने सम्भावना नभएको वेबसाइट मोबाइल एप तथा एसएमएस ३५५३ बाट यात्रु आफैले उडानको अवस्था, टिकटको उपलब्धता तथा भाडादरको बारेमा आफैँ हेर्न र टिकट काट्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको बस्नेतले जानकारी दिए ।
बुद्ध एयरमा उपलब्ध टिकट काट्नको लागि उसको मोबाइल एप वा वेबसाइटमा गएर डेबिट/क्रेडिट तथा इ–सेवाबाट भुक्तानी गर्नसकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २३, २०७४, १०:४१:०६